The MYAWADY Daily: တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်နှင့် ထိုင်းနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ၀န်ကြီး H.E.Mr. Don Pramudwinai တို့ရင်းနှီးစွာ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်နှင့် ထိုင်းနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ၀န်ကြီး H.E.Mr. Don Pramudwinai တို့ရင်းနှီးစွာ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်နှင့် ထိုင်းနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီး H.E.Mr.Don Pramudwinai တို့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးစဉ်။
နယ်နိမိတ်အရ၊ ယဉ်ကျေးမှုအရ၊ စိတ်ဓာတ်ရေးရာအရ ခွဲခြားမရနိုင်သော အိမ်နီးနားချင်းကောင်း နိုင်ငံများဖြစ်ကြပြီး နှစ်နိုင်ငံညှိနှိုင်းလုပ်ဆောင်မှု များကြောင့်ကြီးမားသည့် နယ်စပ်ပြဿနာများ မရှိကြောင်း၊ ၂၀၁၁ ခုနှစ် နောက်ပိုင်း နှစ်နိုင်ငံအကြား၊ တပ်မတော်နှစ်ရပ်အကြား ဆက်ဆံရေး ပိုမိုတိုးတက် ကောင်းမွန်ခဲ့ကြောင်း၊ တပ်မတော်ပိုင်းတွင် Regional Border Committee အဆင့်မှသည် High Level Committee အဆင့်အထိ စဉ်ဆက် မပြတ်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုများရှိခြင်း၊ အစိုးရအချင်းချင်းလည်း အဆင့်ဆင့်သော ထိတွေ့ဆက်ဆံမှု၊ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုများရှိခြင်းသည် နှစ်နိုင်ငံ ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်မှုကို ဖော်ပြနေကြောင်းဖြင့် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်က ထိုင်းနိုင်ငံ၊နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ၀န်ကြီး H.E.Mr. Don Pramudwinai အား ယနေ့မွန်းလွဲပိုင်းတွင် နေပြည်တော်ရှိ ဇေယျာသီရိဗိမာန် ဧည့်ခန်းမဆောင်၌ လက်ခံတွေ့ဆုံစဉ် ထည့်သွင်း ပြောကြားသည်။
အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲသို့ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်နှင့်အတူ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး (ကြည်း) မှ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး စိုးထွဋ်နှင့် တပ်မတော်အရာရှိကြီးများ တက်ရောက်ကြပြီး ထိုင်းနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ၀န်ကြီးနှင့် အတူမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ထိုင်းနိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Jukr Boon-Long နှင့် တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ကြသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် ဧည့်သည်တော် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးက မိမိတို့နှစ်နိုင်ငံသည် ရှည်လျားစွာနယ်နိမိတ် ထိစပ်နေသော်လည်း ကြီးမားသည့် ပြဿနာများမရှိပါကြောင်း၊ တပ်မတော်နှစ်ရပ်အကြား အကောင်းဆုံးသော ဆက်ဆံရေးရှိသကဲ့သို့ နှစ်နိုင်ငံနိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးဌာနချင်းလည်း ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ကြောင်း၊ နီးကပ်စွာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ အပြန်အလှန် ထောက်ခံအားပေးမှုများလည်း ရှိပါကြောင်း၊ ထိုင်းနိုင်ငံအနေဖြင့် မြန်မာ နိုင်ငံအစိုးရ၏ ရပ်တည်လုပ်ဆောင်မှုများ ကိုထောက်ခံပါကြောင်း၊ ရခိုင်ဒေသအရေးနှင့် ပတ်သက်၍ အစိုးရ၏လုပ်ဆောင်မှုများမှာ တိုးတက်မှုရှိသော်လည်း အချိန်ယူဆောင်ရွက် ရမည့်ကိစ္စဖြစ်ကြောင်း၊ ထိုင်းနိုင်ငံတွင်လည်း ယင်းအခြေအနေမျိုး ကြုံတွေ့ခဲ့ရ၍ ရှုပ်ထွေးမှုနှင့် အချိန်ယူဖြေရှင်းရန်လိုအပ်မှုကို သိရှိနားလည်ကြောင်း၊ ကာလတို၊ ကာလလတ်၊ ကာလရှည်ခွဲခြားပြီး ဘက်ပေါင်းစုံမှကြည့်၍ လုပ်ဆောင်ရမည့် အရေးဟုရှုမြင်ကြောင်း ဆွေးနွေးပြောကြားသည်။
ထို့နောက် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က မြန်မာ-ထိုင်း နှစ်နိုင်ငံ ကီလိုမီတာ ၂၀၀၀ ကျော်နယ်နိမိတ်ထိစပ်နေပြီး နယ်နိမိတ်တိုင်းတာရန် နေရာတချို့ကျန်ရှိသော်လည်း ကြီးမားသည့် နယ်စပ်ပြဿနာမရှိကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံ အားလုံးနှင့် နယ်နိမိတ်ဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကို အေးချမ်းသောနည်းလမ်းဖြင့် ဖြေရှင်း ဆောင်ရွက်နေသော် လည်း အနောက်ဘက်ခြမ်းတွင် ပြဿနာတချို့ရှိကြောင်းဆွေးနွေး ပြောကြားသည်။
ဆက်လက်ပြီး ရခိုင်ပြည်နယ်အရေးနှင့်ပတ်သက်၍ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအများစုက မိမိတို့နိုင်ငံ၏ အဖြစ်အပျက်အမှန်များကိုမသိကြဘဲ မီဒီယာများ၏ စွပ်စွဲပြောဆိုမှုများအပေါ် အခြေခံ၍မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ဖိအားများပေးနေကြကြောင်း၊ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ အမှန်တရား ကိုလက်ခံရမည်သာဖြစ်ကြောင်း၊ ရခိုင်ပြည်နယ်အရေးသည် နှစ်ကာလ များစွာက ဖြစ်ပျက် ခဲ့သော အကြောင်းအရာများအပေါ်တွင် အခြေခံပြီး ကြိုတင်ပြင်ဆင်လုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ မည်သည့်နိုင်ငံမဆို မည်သူမည်ဝါဖြစ်သည်ကို မခွဲခြားနိုင်ဘဲ နိုင်ငံသားအဖြစ် လက်မခံနိုင်ကြောင်း၊ ယင်းကိုစိစစ်ရန်လုပ်ဆောင်ရာမှ ပြဿနာဖြစ်ပွား ရခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ဖြစ်စဉ်တွင် ဘင်္ဂါလီအကြမ်းဖက်အင်အား ၄၀၀၀ ခန့်က တစ်ချိန်တည်းတစ်ပြိုင်တည်း အင်အားသုံး စတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းသာဖြစ်ပြီး လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များအနေဖြင့် အင်အားသုံး၍ တိုက်ခိုက်သတ်ဖြတ်မှု၊ အကြမ်းဖက်ဖိနှိပ်မှုများ ကျူးလွန်မှုမရှိကြောင်း၊ ဖြစ်ရပ်မှန် များကို ဖုံးကွယ်ထား၍မရနိုင်ကြောင်း၊ မိမိတို့အနေဖြင့်အမှန်အတိုင်းသာ ရပ်တည်လုပ် ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ တပ်မတော်အနေဖြင့် နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်သည့် ရခိုင်ပြည်နယ် တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုနှင့် ဖွံ့ဖြိုးမှု တိုးတက်ရေး အကောင်အထည်ဖော်ရေးဗဟိုကော်မတီ၏ လုပ်ငန်းများအောင်မြင် စေရေး ၀ိုင်းဝန်းကူညီလုပ်ဆောင်နေကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားသည်။
ယင်းနောက် နိုင်ငံတကာမီဒီယာမျက်နှာစာတွင် အင်အားအချိုးမညီစွာ ဖော်ပြ နေမှုများကြောင့် ဖြစ်စဉ်အမှန်များကို နိုင်ငံတကာကသိရှိရန် လိုအပ်မှုအခြေအနေများ၊ နှစ်နိုင်ငံအတွေ့အကြုံများအပေါ်အခြေခံပြီး ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းလုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် ပြဿနာများဖြေရှင်းရာတွင် အထောက်အကူပြုနိုင်မည့်အခြေအနေများ၊ မိတ်ဆွေ ကောင်းပီသမှု၊ ညီအစ်ကိုစိတ်ဖြင့် အပြန်အလှန်ယုံကြည်မှုတို့ဖြင့် နှစ်နိုင်ငံတပ်မတော် နှစ်ရပ်အကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့် ထာဝရ တည်ငြိမ်အေးချမ်းသော နယ်စပ်ဒေသဖြစ်ရေးတို့အပေါ် အပြန်အလှန် အမြင်ချင်းဖလှယ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
တွေ့ဆုံပွဲအပြီးတွင် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့် ထိုင်းနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြား ရေးဝန်ကြီးတို့သည် အထိမ်းအမှတ်လက်ဆောင်ပစ္စည်းများ အပြန်အလှန်ပေးအပ်ခဲ့ကြ ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။